Yuusuf Dabageed oo ka hadlayy Arrinta Sarkaalka kasoo horjeeda Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad Goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegey in uu Beledweyne ku wajahanyahay Madaxweynaha Hirshabeelle, isagoo dhinaca kale sheegay in lala fariisanayo cid walba oo tabasho qabta, si looga gaaro xal waara.
Madaxweyne Ku-xigeenka Hirshabeelle oo wareysi gaar ah siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ujeedka socdaalka uu ku jooga Hiiraan ay tahay mid uu ugu gogol xaarayo socdaalka Madaxweynaha Hirshabeelle oo la filayo in dhamaadka todobaadka uu halkaasi gaaro, waxaana uu intaa ku daray in uu si horudhac ah kulamo ula qaatay qeybaha bulshada Hiiraan ku nool.
“Qofkasta oo cabaneysa waan la fadhiisaneynaa, waxay ka cabaneyso waan ka dhageysaneynaa, waxaana diyaar u nahay inaan xalino tabashooyinka ay bulshada qabaan, si loo helo bulsho wax wada qabsata” ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle.
Mudane Yuusuf Axmed Hagar ayaa tilmaamay inay qorsheynayaan sidii loo xoojin lahaa howlgallada ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab, isla markaana looga sifeyn lahaa deegaannada ay kaga dhuumaaleysanayaan Hirshabeelle maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Previous articleMusharixiinta iyo Beesha Caalamka oo shir xasaasi ah yeeshay
Next articlelaftagareen oo weerar afka ah ku qaaday musharixiinta ku shirsan Muqdisho